/Blog/Ithala/I-Raw Proviron (iMesterolone) ekwakheni umzimba, umyinge, kunye nomjikelezo
ezaposwa ngomhla 01 / 25 / 2019 by 阿斯劳 bha liweyo Ithala.
Intoni II-Raw Proviron (Mesterolone)?
I-mesterolone eluhlaza ngumgubo we-crystalline, umhlophe ukuba tyheli kwaye awunyibiliki emanzini. Iyaziwa ngegama lalo igama, iProviron. Ithebhulethi / ipilisi nganye yeProviron iqulethe i-25mg powderolone powderNgokungafani nezinye i-steroids, i-Mesterolone eluhlaza inobuthakathaka kakhulu okanye i-zero anabolic. Ngenxa yesi sizathu, akudluliselwa kuyo anabolic steroid. Kulawulwa ngomlomo ngaloo ndlela ayikho injection ye-mesterolone.
I-Schering iphuhlise iMesterolone kwi-1934.Ikalwe phakathi kweyona steroids indala isetyenziswa ecaleni kweMethyltestosterone kunye neTesttosterone Propionate ezaye zaphuhliswa zaza zasetyenziswa kwezonyango ngo-1935 nango-1937 ngokwahlukeneyo. I-testosterone propionate kunye neMethyltestosterone zaziwa kakhulu ngenxa yemisebenzi yazo enamandla ye-anabolic. Iproviron yathathelwa ingqalelo njenge-steroid ebuthathaka ke ukuthandwa kwayo akuzange kwandiswe xa kuthelekiswa nezinye i-steroids ezimbini.
I-Mesterolone (i-Proviron) ithathwa njengeziyobisi zasendulo, iimpawu zayo ezintle zihlala zisesikhathini. Ingumuthi osebenzayo ngokuphathelele ukunyamezela phakathi kwabasebenzisi kunye nokukhuseleko. Kwinkalo yezokwelapha, iMesterolone (1424-00-6) isetyenziselwa ukuphatha impilo encitshiswayo kubantu abaguga abanesifo sokungasebenzi, ukungabikho komzimba kunye namazinga aphantsi a-orgen. Enye yezona analilic steroids zomlomo ezilungileyo kakhulu.
Kumayeza, i-mesterolone (Proviron) yayisetyenziselwa ukulungisa ukungachumi. Ngelixa ezinye i-androgenic okanye i-anabolic steroids zithintela i-gonadotropins engapheliyo ebangela ukungachumi okwethutyana, iProviron, xa isetyenziswe kumayeza aqhelekileyo ayichaphazeli amanqanaba e-LH emzimbeni. Nangona kunjalo, kulungile ukuba iProviron ayinyusi amanqanaba e-LH njengabantu abathile abakholwayo. Ngokophando, iMesterolone yonyusa i-spermatogenesis kwiimvavanyo ngokunika iziphumo ze-androgenic ezifunekayo kule nkqubo.
Iproviron steroid yahlukile ngendlela yayo kodwa yabelana ngeempawu ezithile noWinstrol, Masteron noAnavar. Ukusebenza ngobulumko, i-Mesterolone ayisetyenziswanga ukukhulisa ubunzima bemisipha. Nangona kunjalo, idlala indima ebalulekileyo ngexesha lokujikeleza. Ukusetyenziswa kwayo kufaneleke ngakumbi ekusikeni imijikelezo, nangona kunjalo, umsebenzi wayo ukwahlukile kwesi sigaba.
Ukukhwabanisa okwenjenjalo kuvelisa i-Mesterolone phantsi kwegama legama, iProviron, ehlabathini lonke. Ithengiswa ngokusebenzisa amagama ahlukeneyo, umzekelo, i-Asche neJenephar eJamani bayithengisa phantsi kwePririviron neVistimon ngokulandelanayo. UBrown noBurke eNdiya bayithengisa phantsi kwegama lokubuyisela. Ngokudabukisayo, i-Proviron ayizange ivunyiwe njengemithi yesigqirha e-US
I-AASraw ngumthengisi onokuthenjwa we-Mesterolone (Proviron) ipowder.
Nceda ucofe apha ngolwazi locaphulo. Unxibelelwano nathi
I-Raw Proviron (iMesterolone) Iinkcukacha zeChimicals
I-Mesterolone yi-Dihydrotestosterone ishicilelwe ngokufakwa kweqela le-methyl, i-1-methyl-dihydrotestosterone, kwi-1 yayost nekhabhoni. Ngenxa yesi sizathu, le nkunkuma ayifuni ukuphazamiseka kwe-hepatic ngoko ilawulwa ngomlomo. Phakathi kwe-anabolic steroids yomlomo, i-Proviron yenye yezinto ezimbalwa ngaphandle kwe-C17-alpha alkylated kodwa kunokuba ithwale iqela le-methyl. Ngomlomo Primobolan iwa phantsi kwecandelo elifanayo njengeProviron malunga neqela le-methyl. I-C17-aa steroids yomlomo iquka ukuhlaziywa okuphezulu ngaphezu kweProviron. Oku kuye kwaphazamisa ukuthandwa kukaProviron phakathi kwabasebenzi bokuphucula abaqhubekileyo.
Xa kuthelekiswa ne testosterone, iMesterolone ithwala i-anabolic kunye ne-androgenic ye-100-150 kunye ne-30-40 ngokwahlukeneyo. Amanqanaba e-testosterone kwi-100 kwicandelo ngalinye. Ngaphandle kwenqanaba eliphezulu le-anabolic, iMesterolone ibonisa imisebenzi encinci ye-anabolic kune testosterone. Ityala elifanayo liya kwiHalotestin eyaziwayo ngenqanaba eliphezulu le-anabolic kodwa umsebenzi ophantsi we-anabolic. Ukulinganiswa kweproviron kunye ne-androgenic ngamanye amaxesha kunciphisa amanqanaba omsebenzi we-androgenic.
Njengoko kuthethwe ngentla, le nkunkuma ibonisa iimpawu ze-anabolic ezingabalulekanga ngoko zibizwa ngokuba yi-androgenic steroid. Njengokuba i-DHT, umzali wayo, iproviron idilizwe kwaye idibeneyo kwiimetabolites ezingasebenziyo ngokukhawuleza iishubhu ze-muscle ziyifumene. Esi sizathu esona sizathu sokuba kukho imisebenzi ebuthakathaka ye-anabolic.
I-enzyme i-3-hydroxysteroid dehydrogenase, ephakamileyo kakhulu kwiisisu zomzimba, ibophe kwi-dihydrotestosterone kwaye iguqule ibe ngumxube nge-zero anabolic effects. I-proviron, ngoko, iba yinto ebuthakathaka kakhulu ye-anabolic steroid. Iimvumi phakathi kwabakhi bomzimba banalo ukuba iiprovviron bars kunye ne-androgen receptors ezifunyenwe kwiisisipha ze-muscle zenza imisebenzi yayo ye-anabolic inzima. Ngokwenzululwazi, oku akunjalo.
I-Mesterolone inobungqina obunzulu be-Sex Hormone Binding Globulin (SHBG), iprotheni eyazibandakanya kwi-anabolic steroids, njenge-testosterone, eyenza ingasebenzi. Xa i-Proviron isetyenziswa kunye nezinye i-anabolic steroids, ikhuthaza imiphumo nemisebenzi ye-anabolic steroids ngokusebenzisa le nkqubo. Ekugqibeleni, i-testosterone eninzi ikhululekile ukwenza umsebenzi wayo emzimbeni.
Iproviron inokusebenzisana ne-enzyme eguqula i-testosterone kwi-estrogen, eyaziwa nangokuthi i-enzyme ye-aromatase. Le steroid ikhusela umsebenzi we-aromatase ngokuzibophezela kwi-enzyme ye-aromatase kwaye ke ukukhusela i-side effects effects. Iimpembelelo zalo-anti-estrogenic zingaba zinamandla njengezo zi-Aromatase Inhibitor, kodwa umphumo uyabonakala. Amanqanaba axhomekeke kuhlobo lomjikelo umenzi womzimba owenzayo.
Iiprosesi zeProviron (iMesterolone) izibonelelo kulwakhiwo lomzimba (Wenza ntoni uProviron?)
Iproviron ayiyona i-steroid ephezulu esetyenziswe ngabakhi bezakhiwo ngexesha zokujikeleza. Abanye abayi kuwusebenzisa xa bekhulile umjikelezo. Nangona kunjalo, kuqukwa neProviron kwinqanaba, kunceda umenzi womzimba ukuphucula iphuzu eliqhelekileyo kunye nesigaba sokukhupha. Inkqubela ingaqala ukunyuka kwaye ngamanye amaxesha iyanqamuka ngexesha elithile ngexesha lomjikelo kubantu abaninzi. I-Proviron iya kuba yinzuzo kakhulu kule nqanaba kuba iphakamisa inkululeko yezinye i-steroids ezibandakanyiweyo kwi-stack ngaloo ndlela iphakamisa izinga labo lomsebenzi.
Abaqhubi bomzimba abakhuphisanayo basebenzisa ama-dosti amakhulu e-testosterone ngexesha lomjikelezo wokusika, kodwa ngokuqhelekileyo, umyinge uphantsi kweli nqanaba xa kuthelekiswa nomjikelezo wexesha. Nangona kunjalo, abanye abasebenzisi bakhetha ukuthatha inani elincinci le-testosterone ngexesha lexesha lokujikeleza ngezizathu ezithile zobuqu. I-Mesterolone ifikeleleka kwimeko enjalo kuba ihlinzeka ngokunyusa kwe-androgen efunekayo. Oku kunokuba kuthathwa ngokungadingekile, kodwa kunenzuzo kakhulu.
I-Mesterolone eluhlaza isetyenziswe kakuhle, ngabakhi bomzimba, ngexesha lomjikelo wokusika. Ngeli nqanaba, ibonisa izinto ezinzima ezifana nezo ze-Masteron. Nangona, esona sibonelelo sayo sibaluleke kakhulu kukukwazi ukuphucula ukusebenza ngokuqaqamba kwezinye i-steroids ezifakwe kwisitaki. Iproviron ibophelela ngamandla kwi-androgen receptor eyenza ukuba umsebenzisi atshise amafutha omzimba ngokukhawuleza nangokufanelekileyo. Ukujonga iziphumo zeProviron ezichasene ne-estrogenic, abasebenzisi baya kusokola ukugcinwa kwamanzi, kwaye mhlawumbi, akusayi kubakho mfuneko yokubandakanya i-anti-estrogen yemveli kwindawo. Kwakhona, iProviron inyusa inani le testosterone yasimahla. Oku kuluncedo olukhulu kuba amanqanaba e testosterone aphantsi ngokubanzi ngeli xesha lokusetyenziswa kwe-anabolic steroid. Iziphumo ziya kuba ziphakamileyo kubantu ababandakanya iProviron xa kusenziwa idosi testosterone ephantsi xa kuthelekiswa nabasebenzisi abangazenziyo. Ngamafutshane, isibonelelo esibalulekileyo se-mesterolone ngexesha lomjikelo wokusika sisakhono sayo sokuphucula i-androgenicity yezinye i-steroids ebandakanyiweyo kwisitaki ngenjongo yokuqinisa umzimba. Iziphumo ze I proviron isilinganiso iyakwazi kuphela ukuba umsebenzisi uncike.
Njengoko kuthethwe ngaye ngaphambili, i-Mesterolone (Proviron) ivela kwi-DHT. Oku kuthetha ukuba ukusetyenziswa kwayo akuvelisi nayiphi na imiphumo yecala ye-estrogenic. Ukuthelekiswa nezinye iipilisi zokulwa ne-estrogen, umzekelo, i-Nolvadex, i-Proviron nangona ingaqine kakhulu, iyona ndlela iphumelele kakhulu ye-estrogen inhibitor. Ukwenza kucacile, i-proviron iyayicima ukuveliswa kwe-estrogen ngelixa ezinye iipilisi zikhupha i-estrogen eseleyo emzimbeni. Abakhi bomzimba abanesifo se-estrogen kufuneka basebenzise iProviron kunye nezinye i-steroids. Iziphumo ezisecaleni ze-Estrogenic ezibangelwa ezinye i-steroids ziyancitshiswa yiProviron xa zifakwe kwi-stack. Ngenxa ye-anti-estrogen, i-Proviron isetyenziselwa kwiprojekthi yezokwelapha ukunyanga umdlavuza webele kunye ne-gynecomastia.
Proviron steroid, nje ngezinye DHT ivela, idlala indima ebalulekileyo ekulahlekeni kwethambo lomzimba. Ikhuthaza ukuphulwa kwamafutha egciniweyo agcinwe emzimbeni kumbane asetyenziswe kwimisebenzi yemihla ngemihla. Ngokubuyisela, izinga le-lipid emzimbeni linciphile. Ukunciphisa amanqanaba e-lipid kubandakanywa ngamanqanaba okwanda kunye ne-androgen obangelwa ukusetshenziswa kweProviron. Yingakho i-Mesterolone isebenza kakuhle ngexesha lokujikeleza.
Ukusetyenziswa kwe-Steroid kunokuba yinto eyoyikisayo ngakumbi xa abasebenzisi kufuneka bajongane ne-aromatisation kunye neziphumo ezilandelayo. Le yinkqubo apho testosterone emzimbeni okanye leyo ilawulwa nge-steroids iguqulwa ibe yi-estrogen. Iziphumo ezilandelayo zibandakanya ukugcinwa kwamanzi, ukuzuza ubunzima, i-gynecomastia, ukuguquguquka kwehomoni phakathi kwabanye. I-Estrogen ikwakhuthaza imveliso yehomoni yoxinzelelo ye-anti-anabolic, eyaziwa ngokuba yi-cortisol.
Iindaba ezilungileyo kukuba i-Proviron ayifuni i-aromatise. Ithintela le nkqubo inobungozi ngokuzibophezela kwi-enzyme ekhuthaza ukuncutha. Ngenxa yoko iProvon ivimbela imisebenzi ye-estrogenic kwaye ke inika ukhuselo kwimiphumo emibi evezwe yile mi sebenzi.
Uphucula umsebenzi wezinye i-steroids
Ukufezekisa iziphumo eziphezulu, ii-bodybuilders zibeka ii-anabolic kunye ne-androgenic steroids ngeProviron steroid. Okokuqala, njengoko kuchaziwe ngaphambili, kuthintela iziphumo ebezingalindelekanga ze-estrogenic. Okwesibini, iProviron idlala indima yokukhuthaza ezinye i-steroids ezenza ukuba zisebenze ngakumbi. Inokukwenza oko kuba iyazibophelela kwii-androgen receptors kwinkqubo yomzimba. Ekuhambeni kwexesha, zonke ii-steroids zongezwe kwisitaki ziya kusebenza ngakumbi. Umzekelo xa usetyenziswa kunye Anavar okanye Androlic Steroid.
Iyanciphisa i-hormone yesondo ebopha i-globulin (SHBG)
I-hormone ebopha i-globulin ibopha i-testosterone ekhoyo emzimbeni ukunciphisa inani le-testosterone yamahhala. I-Proviron inomlinganiselo ophezulu wokubophelela kule hormone, ngoko iyancitshisa, ekhokelela kwinani eliphezulu le testosterone. I-testosterone yamahhala ikhuthaza imisipha ekwakhiwa ngexesha lokubhukuda nokujikeleza. Abantu abathile ababandakanya iPviron kwi-stack yabo yokujikeleza baya kuba nemivuzo enhle.
Ulungisa ukungabikho komntwana
Mesterolone 1424-00-6 Kwiimeko ezininzi, le ngxaki iziswa ngamanqanaba ancitshisiweyo okuvelisa isidoda. Nangona iinkcukacha malunga nokungachumi kwendoda kunye nokuzala azicacanga, kukholelwa ukuba ukuveliswa kwesidoda kuxhomekeke kwi-gonadotrophins kunye ne-androgens, umzekelo, testosterone. Ezi hormone zinoxanduva lokuvuselela amalungu esini. Iproviron, kwelinye icala, ivuselela i-androgens kodwa ayichaphazeli iigonadotrophins. Oku kuguqulela ukwanelisa ubungakanani besidoda seProviron ekonyusa ukuchuma.
Ukufezekisa ukulungiselela ukulungiselela ukhuphiswano
I-Proviron yinkwenkwe epheleleyo xa ilungiselela ukhuphiswano. Uncedo ekugcineni amandla, ukuphucula ukubonakala kwemisipha nokugcina ubukhulu bomzimba ngexesha lokulungiselela kwintsebenzo. Abaninzi bemizimba yomzimba baye basebenzisa iProviron yokusika kunye nokukhwabanisa kuba iyakwandisa amanqanaba e-androgen ngelixa iyancipha amanqanaba e-estrogen. Ekuhambeni kwexesha, abasebenzisi banandipha iintlawulo ze-androgenic ezifana nesiphumo esiphezulu samandla kunye nemiphumo yokutshisa amafutha xa ukugcinwa kwamanzi kuncitshiswa.
Njengoko kuthethwe ngaye ngaphambili, i-Proviron iphakamisa i-testosterone. Ngokuphindaphindiweyo, i-testosterone ikhulula iimpawu zokungazinzi, ezibizwa ngokuba yi-erectile dysfunction. Kwakhona ngokumangalisayo uyongeza ibido; Esi sizathu esaneleyo naliphi na yomzimba ukuyongeza kwi-stack.
Akukho injection ye-mesterolone
Ingcamango yokusebenzisa inaliti elukhumbeni inokubangela ukuba abantu bakhawuleze ukuba basebenzise i-steroid. Ngenhlanhla, i-proviron ithathwa ngomlomo, ngendlela efanayo ukuba ungathatha intlungu. Ukuba uluhlobo oluthiya inaliti, iProviron kufuneka ukhethe ukuba ungayikhohlwa enye inzuzo yokwakha umzimba.
Enye yeemvavanyo zonyango ezenziwe kwi-mesterolone ibonise ukuba le steroid ingaba ngcono isimo sengqondo sabasebenzisi abathile abanexinzelelo. Oku kuye kwandula ukusetyenziswa phakathi kwabantu abajongene nale meko. Ngokwenzululwazi, iziphumo zokuvavanya azizange zifikeleleke kuba ukubonwa okufanayo kwenziwe kwiqela lolawulo lwe-placebo. Iproviron ineziphumo eziphezulu ze-androgenic ngokunjalo kunokunyusa ukungalingani kwe-hormonal kunye nokusebenza kwesondo ngokwesini. Ngaloo ndlela, i-Proviron iphucula umgangatho wokuphila, ukuzithemba nokukhuthaza isimo sengqondo esilungileyo kunye nesimo esihle kwisakhiwo somzimba.
I-Raw Proviron (Mesterolone) Isisombululo
Mesterolone, owona mculo ophezulu we-anabolic steroid, isetyenziswa ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo; ngeenjongo zonyango ukunyanga isigulo esithile kunye nokwakha umzimba. Izibonelelo zeProviron zininzi kodwa zinokonwaba kuphela xa kulawulwa iidosi ezifanelekileyo. Amanani anconyelweyo kwinjongo nganye aya kuxoxwa ngezantsi.
Ithebhulethi ye-25mg kufuneka ithathwe ngosuku kathathu ukunyanga amandla kunye nokunciphisa iimpawu zesini zesini. Umthamo opheleleyo kufuneka ube yi-75mg ngosuku. Le dosi ilawulwa kwinqanaba lokuqala lonyango. Umthamo unciphisa i-25 mg tablet kube kanye ngemini ngexesha. Imilinganiselo efanayo yeProviron isetyenziselwa ukunyanga ukungachumi kwamadoda. Amanye amachiza asetyenziswa kunye neProviron ukufezekisa iziphumo ezilungileyo.
Ukuphucula ukusebenza kwabakhi bomzimba basebenzise idosi ye-50mg ukuya kwi-150mg mihla le. Ngokophando, i-Proviron isiqingatha sobomi phakathi kwe-12 ukuya kwi-13 iiyure. Injongo ephambili yale dosi kukunciphisa amanqanaba okugcinwa kwamanzi, ikakhulu okubangelwa yi-estrogen. Kwakhona, le dosi iqinisekisa ukuba inqanaba le testosterone kwinkqubo yomzimba iyafuneka ukukhusela nawaphi na amathuba okuba ungachumi emva komjikelo. Kwiimeko ezininzi, amadoda aya kusebenzisa i-100mg ngosuku njengowona mgangatho uphantsi. Nangona kunjalo, zombini i-150mg kunye ne-100mg yeedosi zemihla ngemihla ziya kuba luncedo kakhulu ngokulinganayo. Ulawulo lweedosi zeproviron zihlala zihlala iiveki ezisibhozo ukuya kwezilishumi elinambini. Ukoyisa indawo yokuncamathela eyenzeka ikakhulu kwiiveki zokugqibela zomjikelo, ikhosi yeeveki ezintandathu yeProviron iya kusebenza ngomlingo.
Abasebenzisi ababhinqileyo ababandakanyeka kwimidlalo eyomeleleyo basebenzisa iProviron. Nangona kunjalo, ukusetyenziswa kwayo ngabafazi kuyadimazeka kakhulu. Kwimeko apho umntu obhinqileyo ethatha isigqibo sokuyisebenzisa, idosi eyi-25mg ngosuku inokwanela ukuphucula ukubonakala kwemisipha. Ukungeniswa akufuneki kudlule kwiiveki ezine ukuya kwezintlanu kungenjalo umsebenzisi uya kuba neziphumo ebezingalunganga. Iproviron kunye nokukhulelwa akuhambelani. Oomama abakhulelweyo nabancancisayo kufuneka bayeke eli chiza.
Ukuba ucwangcisa ukusebenzisa iProviron, ukuyibeka kunye nezinye i-steroids kuya kukunceda ngakumbi kunokuba wenzakalise. Abantu baseMesterolone baphinde bafune iWinstrol, iAndrolic, iPrimobolan, iAnavar kunye ne-Masteron, esebenza kakuhle neziyobisi ngexesha lokusika. Iyonyusa i-androgenicity ye-steroids esetyenziswe kwisitaki ukunika umzimba onzima onqwenelekayo. Abanye abasebenzisi banokuyifaka kumjikelo wokubhukuqa ukuba inokuba luncedo kubo.
Azikho iingxelo ngoku ziphumo ezimbi ezibangelwa yimilinganiselo ephezulu yeProviron steroid ngexesha lokujikeleza okanye xa uqhuba i-amesterolone PCT. Nangona kunjalo, ukusetyenziswa okungenamkhawulo kwe-androgens kulandela isiphumo esibi kakhulu esifana nesifo se-cardiovascular, i-virilisation, ukuphazamiseka kwengqondo, i-gynecomastia, iingxaki zesibindi, ukunciphisa i-glucose ukunyamezela, umonakalo wetonon, i-withdrawal syndrome, i-hypogonadal kunye nokuphuma kwintsholongwane. Uvavanyo lweklinikhi lufanele lwenziwe ngabantu ngabanye ukufumana unyango olusetyenziswayo. Abasebenzisi kufuneka babe nolwazi olwaneleyo xa uthatha iProviron kunye nemilinganiselo ekufuneka ilawulwe ukukhusela i-overdosage.
Umjikelezo weRaw Proviron (mesterolone)
Ukuqwalasela ukuba i-Proviron ayinayo i-anabolic steroid, okanye kunokuba inempawu ezinobunzima be-anabolic, ayikwazi ukuhamba ngebhayisikili yodwa. Kunoko, isetyenziswe kunye nezinye i-anabolic steroids, njengesiza esisikhokelo, ukunciphisa iziphumo ze-estrogen emzimbeni. Ukongezelela, kufakwa kwi-stack yeempembelelo zayo ezichasene ne-estrogen kunye nemiphumo ye-esthétique ekuphuculeni umzimba onzima. Ukuba i-androgen eqinileyo yeso sizathu sokuba kutheni amalungu omzimba ayithande.
Abakhi bomzimba kunye nabadlali abasebenzisa iProviron njengesixhobo esincedisayo bathatha umyinge we-50mg ukuya kwi-100mg imihla ngemihla kulo lonke ixesha lokujikeleza. Okwangoku, akukho zithintelo kwisixa sexesha ekufuneka lithathiwe. Iproviron PCT inokusebenzela abanye abakhi bomzimba. Benza njalo ukunciphisa amanqanaba e-estrogen kunye nokuphucula ukuchuma. Nangona oku akusona isigqibo esibi, kukho ezinye iziyobisi ezinempembelelo ezinamandla ezinokusetyenziswa ngexesha le-PCT njengeNolvadex. Iproviron kufuneka ithintelwe kuzo zonke iindleko ukuba kukho umngcipheko wokucinezelwa kwemveliso ye testosterone emzimbeni.
Imijikelezo engezansi kufuneka ikunikezele ngento ekulindelwe.
Umjikelezo weRaw Proviron (mesterolone) 1
Iveki Proviron Dianabol
8 50mgper suku 40mg ngosuku
Umjikelezo weRaw Proviron (mesterolone) 2
Iveki Proviron Anavar
1 40mg / ngosuku 40mg / ngosuku
2 40mg / ngosuku 60mg / ngosuku
3 60mg / ngosuku 80mg / ngosuku
4 60mg / ngosuku 80mg / ngosuku
5 60mg / ngosuku 80mg / ngosuku
I-Raw Proviron (mesterolone) Iziphumo ebezingalindelekanga
Iproviron yeyona steroid ikhuselekileyo xa ithelekiswa nezinye i-anabolic kunye ne-androgenic steroids. Abakhi bomzimba banokusebenzisa le steroid kwaye bonwabele izibonelelo zayo ngaphandle kokujongana neziphumo ebezingalindelekanga. Iziphumo ebezingalindelekanga ezimbalwa zinokubakho, kodwa amathuba okuba asezantsi. Iproviron yabasetyhini ayicetyiswa kuba amanqanaba e-virilisation ephezulu emva kokusetyenziswa. Iziphumo ezinokubakho ze-mesterolone zixutyushwa ngezantsi.
Iziphumo eziqhelekileyo ze-proviron ziquka;
Amanqanaba aphezulu okanye aphantsi kwamandla
Ukuqhutyelwa kwesondo ngokukhawuleza
Ukwandiswa kwesayizi sebele
Imiphumo emibi yeempuron;
Iziphumo ebezingalindelekanga zeProviron zinokuba zibi nangakumbi xa umsebenzisi ethatha i-mesterolone engcolileyo okanye elawula idosi engaphezulu. Ukuthintela lo mngcipheko, abasebenzisi kufuneka bazi ukuba bathathe nini iProviron kunye nezixa ezichanekileyo.
Is Proviron zomthetho?
Imigaqo, imithetho kunye nemigaqo ngokubhekisele kwi-steroids yahlukile phakathi kwemimandla namazwe. Ngangoko i-mesterolone (Proviron) ayikho, ngokwesayensi, i-anabolic steroid ngenxa yeempembelelo zayo ezincinci ze-anabolic, ithathwa kwaye ibhaliswe njenge-anabolic steroid kwamanye amazwe ngokusemthethweni. Iproviron iqhelekile kumazwe amathathu aseNtshona; iUnited States, iUnited Kingdom neKhanada.
E-United States, i-Raw mesterolone idweliswe njengeShedyuli ye-111 yento ephantsi koMthetho oLawulayo weziyobisi. Kule meko, akukho semthethweni ukufumana okanye nokusebenzisa iProviron kulo mmandla. Ukungenisa elizweni, ukuthenga okanye ukurhweba ngokurhweba nge-anabolic steroids, kubandakanya neProviron, kuthathwa njengesenzo solwaphulo-mthetho.
E-United Kingdom (eNgilani), i-Proviron ithathwa njengesicatshulwa seShedyuli IV. Ukuthenga kunye nokusetyenziswa kweProviron kwiimfuno zomntu siqu ngokokusemthethweni kweli lizwe. Ukungeniswa kwale steroid akukona nolwaphulo-mthetho kubantu base-UK.
ECanada, iProviron ibhaliswe phantsi kweShedyuli IV, njengase-UK. Oku kuthetha ukuba ukubanjwa nokuthengwa kwale khompawundi kusemthethweni. Ukuthengiswa kweProviron akuvumelekanga kwaye kuthathelwa ingqalelo njengolwaphulo-mthetho. Abo babanjiswe ngokurhweba ngokuthengisa iProviron bahlawula isohlwayo se- $ 1000 kunye / okanye iinyanga ezintandathu zokuvalelwa kolwaphulo-mthetho lokuqala. Abo benza ulwaphulo-mthetho olulandelayo bahlawula imali eyi- $ 2000 kunye / okanye unyaka omnye entolongweni. Le mithetho ichaziwe kuMthetho oLawula iziyobisi kunye neziyobisi eCanada (CDSA).
I-Mesterolone ithengiswe kwi-intanethi
Eyona ndlela ilula kunye nexabiso eliphantsi yokuthenga i-proviron nge-intanethi ngokobuninzi babasebenzisi. Ukuthenga kubathengisi bendawo kuyakubiza ngaphezulu. Abathengisi abaninzi bokuthamba abalihambisi ichiza okanye banalo ngesixa esincinci. Uninzi lwabathengisi abakwi-Intanethi baneProviron okanye uhlobo lwayo ngobuninzi. Amathuba okufumana i-intanethi yomgunyathi iphezulu kakhulu ukuba ujonge uphawu lwangaphantsi komhlaba. Nangona kunjalo, ayizukuba njalo ukuba wenza imvelaphi yokujonga kumthengisi wakho. Ngobuninzi beShering Proviron esemthethweni kwimarike, ngekhe kubekho sizathu sokuba uthenge uhlobo oluqhelekileyo lwentengiso.
Ukuthengwa kwe-Proviron kwi-intanethi kunokubonakala ngathi yindlela elula yokufumana iziyobisi, kodwa kukho iingozi ezibandakanyekayo. Ekubeni i-Proviron yicandelo lesiHlomelo III e-United States, ukuyithenga nge-intanethi kuya kuphula umthetho. Oku kulandela iintlawulo ezinkulu okanye ukuvalelwa entolongweni. Abasebenzisi banokuthenga ngokusemthethweni esi sigqirha kuphela xa benemishanguzo. Kuphi imirhumo kufuneka ivunyiwe ngokusemthethweni, ichanekileyo kwaye yaziwa nguRhulumente. Amanye amazwe anemithetho efanayo, nangona i-US iyanzima kwimithetho. Amanye amazwe akhululekile kodwa anqongqo kunye nokuthengiswa kwe-intanethi ye-anabolic steroids. Kanye kunye neProviron yiyona anabolic steroid ephephile, i-FDA ayizange isetyenziswe ngokusemthethweni kwi-United States.
Indlela yokuthenga iProviron
Iproviron ayixhaphakanga kakhulu kwintengiso ngokuthelekiswa nezinye izincedisi, ii-anabolic steroids okanye iikhompawundi. Nangona kunjalo ithathwa njengesixhobo esifunekayo nesifumaneka ngokulula kwimarike. Elona nani likhulu le-mesterolone eluhlaza yenziwa ngamayeza eSherher. Ngenxa yobume kunye nolwakhiwo lweProviron, kunzima ukuvelisa inkohliso. Oku akuthethi ukuba abasebenzisi akufuneki balumke xa bethenga. Ayizizo zonke Proviron ukuthengiswa isikhangiso kufuneka sithembeke.
Ngaphandle kweemveliso eziveliswe ngamaqumrhu okuxuba, kukho ezo zenziwe ngamabhanki angaphantsi komhlaba. Ezi iilebhu zeplastiki azivunywanga, zihlolwe okanye zivunywe. Ngamafutshane, asebenza ngokungekho mthethweni. Proviron SARM enye yezinto eziveliswe ngamalabhu amakhulu angaphantsi komhlaba aziwa ngabantu abaninzi. Amabhanki amancinci angaphantsi komhlaba awayivelanga eli qulunqa kuba akuqhelekanga. Kunoko, bakhetha ukuvelisa enye i-anabolic steroids ethandwa kunye nezibonelelo.
Ngokubanzi, iProviron ayibizi kakhulu, kwaye ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, inokufumaneka ngokulula. Ukuthengwa kweenkampani ezixuba amayeza kubiza kakhulu kunokuthenga kubathengisi abaphantsi komhlaba. Oku kunjalo, nangona kunjalo, imeko yazo zonke iimveliso zelebhu zangaphantsi (UGL) xa kuthelekiswa nezinto ezenziwe ngamayeza. Umzekelo, i-Schering ithengisa i-25mg Proviron kwi- $ 0.83; Ezinye iinkampani ezixuba amayeza ziyithengisa nge- $ 0.75. Ilebhu engaphantsi komhlaba (UGL); Ngakolunye uhlangothi, thengisa i-25mg Proviron ye-$ 0.50.also, iilabhu zangaphantsi zingase zenze i-proviron kwiinkcenkcesho ezahlukeneyo ezifana ne-100mg, 50mg, 25mg okanye ye-20mg. Umgangatho wezinto ezininzi ezenziwe ngaphantsi komhlaba ungathandabuzeki ngoko ukuthelekisa amaxabiso kunye nezinto zokuxuba iimveliso zengxaki.
Ukufumana ubonelelo oluthembekileyo oluthengisa iProviron esemthethweni ngamanye amaxesha kunokuba ngumsebenzi onzima. Iproviron yentengiso okanye i-mesterolone yentengiso zentengiso zikwi-intanethi yonke. Abasebenzisi akufuneki bathenge nayiphi na imveliso ngaphandle kokwenza itsheki yangasemva yomthengisi. Nangona kunjalo, unokuthenga ngokulula iProviron kwi-intanethi kwintengiso yethu. KwiSteroid.com, sinika ii-anabolics ezisemthethweni ezifunyanwa ngokusemthethweni ngaphandle komyalelo. Amaxabiso ethu ayafikeleleka kwaye ayahambelana nomgangatho weemveliso zethu. Uya kuziva ukhululekile xa uthenga iProviron kuthi kuba siqhuba ishishini eliselubala nelisemthethweni. Abantu beMesterolone bakwakhangela ezinye ii-anabolic steroids, esizibonelela ngokusemthethweni.
Iproviron ayinakuba namandla njengezinye i-anabolic steroids, kodwa izibonelelo zayo ziyaqapheleka ekupheleni kwemijikelo. Ndiyisebenzisile kwimijikelezo yam yokusika naxa ndilungiselela ukhuphiswano. Ukuza kuthi ga ngoku yonke into ibilungile, akukho sikhalazo. Ngaphambi kokuba ndiyifumene le steroid, bendinemicimbi ngamanqanaba e testosterone emzimbeni wam kwaye ndaye ndathabatha idosi enkulu ye testosterone endo native. Ngoku ukuba ndibandakanye iProviron Bayer kwisitaki sam, ndisebenzisa kuphela isixa esincinci se-testosterone engapheliyo kwaye ngamanye amaxesha akukho. Ndiyayithanda inyani yokuba le steroid indinceda ndigcine izihlunu ezixineneyo zakha kwimijikelo yam yokubhukuda. Uninzi lwabakhi bomzimba abangazinanziyo iziphumo zalo, andinakuyeka ukuyongeza kwisitaki sam. Le steroid ingcono kunezinye ii-SARM endikhe ndazisebenzisa ngaphambili. Ngokwenyani, kuya kufuneka ndijongane nentloko ebukhali kube kanye ngexeshana. Umoya wam kunye nemvakalelo yempilo-ntle iphuculwe kakhulu.
Wenza ntoni u-proviron? Uninzi lwabantu lucinga ukuba i-proviron (1424-00-6) yi-steroid ebuthathaka. Mhlawumbi ngenxa yokuba bengayiqondi ihomoni okanye bengayisebenzisi ngendlela eyiyo, awunakulubona utshintsho lomlingo kwangoko ujikelezisa le steroid, kodwa iziphumo zayo ziyacotha kodwa ziqinisekile; ngakumbi xa ujikeleza. Ikhethekile kwaye ikhethekile kuba abasebenzisi abanaziphumo zibi xa besebenzisa ezinye i-anabolic steroids. Ukufumana i-masterone (Proviron) ngokusemthethweni ngaphandle kommiselo kunokwenzeka. Abathengi banokuyifumana kwiSteroid.com ngamaxabiso asepokothweni.
1 i-alpha-mythyl-17 beta-hydroxy-5alpha-androstan-3-enye
Isululwazi ye-molecular: C2OH3202
Isisindo se-proviron: i-304.4716
Umenzi wezobisi: Ukuhlambalaza
Indawo yokuqhafaza i-molecule: Ayifuni
I-Proviron-half-life: ii-12-13 iiyure
Umhla wokuphuma: 1960
Amanani aphakanyisiweyo: 25mgs ukuya kwi-200mgs imihla ngemihla
I-Androgenic / I-Anabolic Ratio: 30-40: 100-150
Ukufumana ixesha: iiveki ezintlanu ukuya ezintandathu
I-AJ, SL, kunye neAA, OA (2009). I-Mesterolone (Proviron) inciphisa umgangatho wesidoda ophantsi kunye nokuncitshiswa kweprofayili yehomoni yesini kwindoda endala ye-Sprague Dawley rats testis. Uphando lweNzululwazi kunye neencoko, 4(4), 320-327.
Imijelo, i-MA, kunye noMxholo, kwiQonga lase-UK lokwakha izihlunu zomzimba.
ICasquero, AC, Berti, JA, Teixeira, LLS, kunye no-Oliveira, HCF (2017). Ukuzivocavoca okungapheliyo kunciphisa i-CETP kunye neMesterolone Treatment Counteract Exercise Exercise kwiPlasma Lipoproteins Profile: Izifundo kwiimpuku zeTransgenic. Lipids, 52(12), 981-990.
Inzuzo ephezulu ye-15 Winstrol Okufuneka Uyiqonde Ngaphambi Ukuthenga i-Winstrol Online I-Isotretinoin e-Raw (i-Accutane) ye-acne: Ukwelapha i-Acne ne-Isotretinoin